उद्घाटन र समापन मन्तव्यमार्फत् ओलीले प्रचण्ड पक्षलाई दिएको सन्देश
साझापोस्ट टिप्पणी/काठमाडौं, २१ माघ । पार्टी एकताअघि पनि केपी शर्मा ओली तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष थिए भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि माओवादी केन्द्रको । चुनावी गठबन्धनसँगै प्रचण्ड र ओलीले दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्थासहित पार्टी एकता गरे । ९ सदस्यीय सचिवालयमा २ जना अध्यक्ष छन् । अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसहित सचिवालयमा महासचिव विष्णु पौडेल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, इश्वर पोख्रेल,रामबहादुर थापा, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल छन् ।
लामो समयसम्म वरियताक्रममा ओली र प्रचण्डको विवाद भयो । कसको हातमा कति अधिकार भन्ने सवालमा दुईजना अध्यक्षबीच हानथाप जस्तै हुन्थ्यो । एकतापछि पार्टीका बैठकहरुमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले अध्यक्षता गर्दै आए । त्यसमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई मन परेको थिएन । सचिवालयमा पनि अन्य सदस्यसँगको कुर्चीमा प्रचण्ड हुन्थे । बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाएका प्रचण्डले अनेकन बहाना झिकेर ओलीलाई एक्लाउने कोसिस गरे ।
कहिले सचिवलयका पाँच सदस्यहरुलाई खुमलटार बोलाएर आफूमा बहुमत रहेको सन्देश दिए त कहिले भैसीपाटीको वामदेव निवासमा भेला भएर । लामो समयसम्म पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्न नपाएका प्रचण्डले पार्टी एकता हुँदा भएको गोप्य सहमति सार्वजनिक गरे । जसमा ओली र प्रचण्डले आलोपालो सरकार चलाउने थियो ।
बाहिर मिडियामा पनि स्वयं प्रचण्डले एउटाले पार्टी र अर्कोले सरकारको जिम्मा लिए जनअपेक्षाअनुसार काम हुने बताउँदै आएका थिए । लामो समयसम्म प्रचण्डको यो उकुसमुकसलाई ओलीले सम्बोधन गरेनन् । ओली पनि प्रचण्डको नाडी छाम्दै थिए । जब प्रचण्डले आलोपालो सहमति सार्वजनिक गरे तब ओली लचक हुने अवस्थामा पुगे । अन्तत संवैधानिक निकायमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डले कार्य विभाजन गरे ।
मंसिर ४ गते राष्ट्रपतिलाई भेट्न एउटै गाडी चढेर शितलनिवास पुगेका ओली प्रचण्डले लगत्तै सचिवालय बैठकमार्फत एउटाले पार्टी कामको जिम्मा लिने र अर्कोले पूरा अवधिभर सरकार चलाउने निर्णय सार्वजनिक भयो । जसमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने जिम्मा दिइएको थियो ।
कार्यकारी अधिकार पाएपछि माओवादी निकट नेता कार्यकर्ता निकै खुशी र उत्साहित भए । प्रचण्डलाई बधाई यतिसम्म आयो कि मानौँ उनले महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । कार्यकारीको अधिकार पाएपछि प्रचण्ड स्वयंले पनि ‘कार्यकारीको फिल आएको’ मिडियामा प्रतिक्रिया दिए ।
तर, अर्का अध्यक्ष ओलीलाई यो कुरा मन परेन । उनले लगत्तै एक राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफू नै सिनियर रहेको बताए । अध्यक्षमा पनि पहिलो र दोस्रो हुने भन्दै आफू पहिलो नम्बरको रहेको ओलीको दावी थियो । तर, यो दावी प्रचण्डलाई मन परेको थिएन । पछि, प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएपछि र वरियताक्रमको विवाद भावनामा सेलाएर गयो । अहिले सचिवालयमा ओली र प्रचण्डको छुट्टै र समानान्तर कुर्ची छ । यसबाट प्रचण्डलाई केही राहत मिलेको छ । तर, कार्यकारी अधिकार पाएपनि प्रचण्डलाई सन्तुष्टि मिलेको छैन । वरियताक्रमको मौन विवाद फेरी ओली र प्रचण्डबीच देखिएको छ ।
करिब २ वर्षपछि बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको मुख्य अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरे । संयुक्तरुपमा अध्यक्षता गरेपनि बैठक उद्घाटन सत्र र बन्दसत्रमा ओलीको अध्यता जबर्दस्त थियो । अर्थात् एक नम्बर अध्यक्ष आफू नै भएको ओलीले प्रमाणित गरिदिए । बैठक अवधिभर नबसेका ओलीको भूमिकाप्रति प्रचण्डको मन खुशी थिएन । त्यसैले ओली बोलिरहँदा प्रचण्ड कहिले हाँसोमा त कहिले उकुसकुसमा देखिन्थे । पार्टी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ ओलीको जस्तो सार्वजनिक पनि भएन । ओलीको भने भिडियोसहितको भाषण मिडियामा सार्वजनिक भए ।
प्रचण्डलेभित्र के बोले ? केन्द्रीय सदस्यहरुलाई के जवाफ दिए ? बैठक हलमा बस्ने बाहेक अरु जानकार छैनन् । तर, ओलीको भाषणबारे केन्द्रीय सदस्यसहित मिडिया जानकार छन् । ओलीले फेरी एकपटक आफू नै पहिलो नम्बरको अध्यक्ष रहेको देखाइदिँदा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष ‘फिलिङ’मा मात्र सीमित भएको छ ।
बाध्यतामा नेकपा नेता, कार्यकर्ता
नेकपाका धेरै नेतालाई थाहा छ प्रधानमन्त्री ओलीसँग जुहारी खेले प्रतिशोध साँद्छन् । त्यसैले ओलीको विरुद्धमा बोल्न डराउँछन् । यसको उदाहरण हो, नागरिक पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको व्यवहार । ताप्लेजुङ पुगेर चुनाव जिताएर पठाए भट्टराईलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने ओलीले व्यवहारमा भने देखाएनन् । योगेशलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै ‌ओलीको पार्टीभित्रै कडा आलोचना भयो ।
बाध्यतावश तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि भट्टराई मन्त्री भएका छन् । त्यसैले ओलीसँग जुहारी खेल्ने पक्षमा नेकपाका कोही नेताहरु पनि छैनन् । ओलीले जे भन्छन्, मानिरहेका छन् । प्रचण्डको पक्ष लिएर पनि नेकपा नेताहरु ओलीको विरुद्धमा बोल्न डराइरहेका छन् । कार्यकारी अधिकार दिएर पनि पार्टी बैठकको अध्यता गर्न किन नदिएको भनेर प्रश्न गर्ने हैसियत समेत उनीहरुले राखेका छैनन् ।
‘कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले प्रचण्डले नै पार्टी बैठकको मुख्य अध्यता गर्न पाउनुपर्थ्यो । तर, भएन बोल्यो कि पोल्यो हुन्छ,’ तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने ।
पूर्व एमाले भने ओलीलाई नै एक नम्बर अध्यक्ष भएकोमा खुशी छन् । ओलीले जे गरिरहेका छन्, ठिक छ भन्ने उनीहरुको बुझाई रहेको छ ।
‘पहिलेदेखि कार्यकारी अध्यक्ष दिने भन्ने थियो, पछि दिइयो । कसको नाम अगाडि लिने भन्दा प्रधानमन्त्रीको आएको हो । स्वभाविक हिसाबले उहाँ पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हो,’ नेकपा नेता रामकुमार ज्ञवालीले भने ।
प्रचण्ड ओलीको खेतालो
प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार पाएपनि उनी एक्लैले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विश्लेषकहरु प्रचण्डको यो अवस्थालाई ओलीको खेतालोको रुपमा चित्रण गर्छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार प्रचण्ड अहिले ओलीको खेताला भएका छन् । ‘राजनीतिक र सामाजिक रुपबाट प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोल्ने क्षमता नेकपा नेताहरु छैनन् । ओलीविरुद्ध बोल्ने क्षमता नेताहरुमा हरायो । प्रचण्ड अहिले ओलीको खेताला भएका छन् । प्रचण्ड मात्र होइन अहिले सबै ओलीका खेताला जस्ता भएका छन्,’ विश्लेषक रोकाले भने ।
‘संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा नरहेका ओलीको बारेमा के बोल्न लगाउनुहुन्छ ?,’ विश्लेषक रोकाले प्रश्न समेत गरे ।